များအတွက်အကြံပြုချက် P3Dv4 autoinstaller
မေးခွန်း များအတွက်အကြံပြုချက် P3Dv4 autoinstaller
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #950 by DRCW
ဟေ့ငါအဘို့အ2လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဒေါင်းလုဒ် P3D4 များအတွက်တည်နေရာနေသော v86 နှင့်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, installer ကို (ပရိုဂရမျက x (32) သို့ဖိုင်ကို load လုပ်ဖို့လိုလားချပ်အစီအစဉ်များကိုကိုက်။ Lockheed 64 နည်းနည်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက် Program Files ထဲမှာတပ်ဆင်ပြီး။ select လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါအဆိုပါရလဒ်မျှမလေယာဉ်ပျံကိုတွေ့ထားပြီ ငါ install တစ်ခုအရိပ်အယောင်ရသော်လည်းလေယာဉ်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မလေယာဉ်ဖိုင်တွဲများနှင့်ရှိဘာမျှမသို့ကြည့်ရှုကြ၏။ ကိုယ့်ကို manually သို့ဖြစ်. အဘယ်သို့ငါလေယာဉ်မှလေယာဉ်ဖိုလ်ဒါကိုကော်ပီကူး, ငါ့ဒက်စ်တော့မှလေယာဉ် install အဖြစ်ဤသည်ငါ့အဘို့ပြဿနာတစ်ခုမဖြစ် ဖိုင်တွဲ။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုငါသိစေမယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #951 by rikoooo
ငါအမှားမျိုးပွားခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကပြင်ပေးဖို့တချို့စမ်းသပ် run နိုင်အောင်အဲဒီ addons တွေထဲက၏အမည်ရှိပါစေသော။
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #953 by DRCW
သေချာတာပေါ့ ... အဆိုပါစွန်ငှက် 50 နှင့်ဒေါက်ဂလပ် C47, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #954 by rikoooo
ကိုယ့်အချို့စမ်းသပ်မှုအပြေးနှင့် installer ကိုငါ့အဘို့ 64-bits folder ကိုအထဲသို့ဝင်ခြင်းမရှိပြဿနာတွေ့ပါပြီ။
ငါက Windows 10 64-bits အပေါ်မိပါတယ်။ သုံးပြီး P3D v4 ။ သို့သော်လည်းငါသည်လည်းရှိ P3D v1 v2 v3, FSX နှင့် FSX ရေနွေးငွေ့ကို install နှင့် X-Plane9မှ 11 ။
ထိုသို့လမ်းကြောင်းကိုအဘို့အကြည့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် installer ကိုအမှားလုပ်လို့မရပါဘူး P3D Windows အ registry ကိုထံမှ v4 ခဲ့ကြသည် P3D v4 လမ်းကြောင်းနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် key ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
သငျသညျ HKEY_CURRENT_USER \_ Software \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှသို့ကြည့်ရှုနိုင်မည် \_Prepar3D v4 \_ AppPath
HKEY_LOCAL_MACHINE \_ SOFTWARE \_ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ \_Prepar3D v4 \_ SetupPath
နှစ်ဦးစလုံးသော့ချက် (သူတို့အား registry ကိုသော့accèsဖို့ကို Windows command ကိုကနေအသုံးပြုမှု regedit.exe) ၏ဘာလမ်းကြောင်းကိုငါ့ကိုပြောပြပါ
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #955 by DRCW
သေချာတာပေါ့, ငါပြတင်းပေါက်7SP1 ... ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကသုံးပြီးငါငါသို့ကြည့်ရှုမည်
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #961 by DRCW
အိုကေ, ကပြတင်းပေါက်7နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အက registry ကိုအမှားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒေါင်းလုဒ်အော်တိုခဲ့သော်လည်းပြတင်းပေါက်7ဟောင်းသစ်စာရှိတဲ့အစီအစဉ် (x86) ကို download လုပ်ပါချင်တယ်။ ငါမကြာမီအပေါ်ပြတင်းပေါက် run ဖို့ SSD ကို drive ကိုဝယ်ယူပါလိမ့်မည်, ငါတွေ့ပြီ FSX နှင့် P3D သီးခြား drive ပေါ်တွင်အများကြီးပိုကောင်း run ။ Windows ကိုလမျး၌အရလေ့ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့အချိန်မီတုံ့ပြန်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်! မင်္ဂလာ Land
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #963 by rikoooo
0.223 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်